Archive du 20180111
Fisamborana an-dRavalomanana Hanaratsy endrika tanteraka ny fitondrana
Nahoraka be omaly hariva sy hatramin’ny alina fa ho avy ny fisamborana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Raha nanontaniana momba izany ny tenany nandritra ny fanadiovana niarahany tamin’ny kaominina teny Soanierana dia nanao sarinteny sy sangisangy hoe :
Raveloson Constant KMMR misokatra no tantaniko
Atoa Raveloson Constant mpikambana ao amin’ny antoko MFM no notendren’ny kandida Marc Ravalomanana hitantana ny KMMR na Komity Mpanohana an’i Marc Ravalomanana vaovao.
Monja Roindefo « Madio aho ! »
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly alarobia tetsy amin’ny trano fonenan’ny filohan’ny antoko Monima, Monja Roindefo Zafitsimivalo, etsy Antsahabe ny fisian’ny tranonkalam-pifandraisan’ny antoko hampitan’izy ireo ny vaovao misy eto amin’ny firenena sy ny fahitany izany.
Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Efa manisa andro sisa…
Mivoaka indray ny resaka momba ny fanalana ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier. Amin’ny herinandro ambony indray no fotoana voalaza fa hanesorana azy raha ny loharanom-baovao.
Gangstabab Efa miomana ho ben’ny tanàna
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny Le pavé Antanimena ireo birao mandrafitra ny Antoko Politika Madio (APM) tarihin’ny filohany Faniry Alban Rakotoarisoa na Gangstabab.
Pasitera Mailhol Nanakiana mafy ny filoham-pirenena
Anisan’ireo tsy tazana teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny pasitera Mailhol na André Christian Dieudonné nandritry ny lanonam-panjakana fifampiarahabana nahatratra ny taona farany teo.
Jean Nirina HAFARI Aleo fidiana ny sefom-pokontany
Naneho ny heviny mahakasika ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy, omaly, nandritra ny asa fanadiovana faobe nandraisan’izy ireo anjara.
Rugby à XV GOLD TOP 8 Lavon’Ambondrona tamin’ny moka fohy ny Cosfa
Tontosa soa amantsara omaly alarobia 10 aogositra teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka ny andro faha-2 an’ilay fifaninanana rugby à XV “Gold Top 8”
Razafimbelo Norbert sy ny Analamanga rugby Kandida be fitetika miaraka amin-dRajaonarimampianina
Atoa Razafimbelo Norbert mpitantana ny fileovana AFA Ankazomanga ankehitriny hatreto no hany kandida efa nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana ho filoha vaovaon’ny rafitra ligin’ny rugby eto Analamanga teny amin’ny biraon’ny Malagasy Rugby hifarana ny sabotsy 13 janoary ho avy izao.
Ady totohondry Malagasy Nangataka AGO ireo filohana ligim-paritra
Nandefa taratasy any amin’ny Tale Jeneralin’ny Spaoro ao anivon’ny minisiteran’ny fanatanjahantena ireo filohan’ny ligim-paritry ny taranja ady totohondry Malagasy ka mangataka ny hanatanterahan’ny
RN 1 mihazo an’i Fenoarivo Voarara ho an’ny fiara mihoatra ny 15 taonina
RN 1 mihazo an’i Fenoarivo Voarara ho an’ny fiara mihoatra ny 15 taonina hahasimban’ity lalana ity indray izay marihina fa efa dibo-drano tanteraka tsy azo nampiasaina intsony, taona vitsy lasa izay.
Fiara nivadika teny Andranomena Vehivavy roa naratra mafy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Andranomena, lalana mihazo an’Ivato, omaly maraina tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany.
Tetezan’i Vohiposa Hovitaina ao anatin’ny 48ora
Maro amin’ireo lalana sy tetezana tapaka nandritra ny fotoanan’ny rivodoza no tsy mbola miverina amin’ny laoniny amin’izao fotoana izao, raha tsy hilaza afatsy ny tetezan’i Vohiposa any amin’ny RN7 mihazo an’i Fianarantsoa sy ny tetezana ao
FANODINANA NY FANAMPIANA
Hay ny havan’ny Hvm sy ny namany ihany no tena nahazo tamin’ireo vary 100 taonina izay fanampian’ny filoham-pirenena homena ny vahoakan’i Toamasina.